Wasiirro Marko u tegay dedaal nabadeed – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Marko – Mareeg.com: Wafdi ay hoggaaminayaan wasiirada arrimaha gudaha iyo gaashaandhigga ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya C/llaahi Goodax Barre iyo Maxamed Sheekh Xasan Xaamud, ayaa gaaraya magaalada Marka si xal loogu helo dagaal beeleedyada ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose.
Labada wasiir ayaa lagu wadaa in ay kulamo la qaataan odayaasha dhaqanka iyo wax garadka beelaha ku dagaalamay gobolka, waxaan al sheegay in ay qorsheynayaan in deegaanada lagu dagaalamay laga saaro maleeshiyaadka hubaysan.
Wasiirka arrimaha gudaha Cabdullaahi Goodax Barre, oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dowladda ay awood buuxdo saari doonto sidii amniga magaalada loo sugi lahaa, dib u heshiisiin buuxdana loo dhax dhigi lahaa beelaha dagaalka uu dhax maray.
Dagaalada ka dhacay deegaanada kale duwan ee gobolka Shabeellaha hoose todobaadkaan, ayaa la rumeysan yahay in ay ku geeriyoodeen ku dhowaad toban qof oo ay ku jiraan dad rayid ah.
Ra’isal wasaraha dowladda federaalka ah, ayaa dalbaday in si degdeg ah loo joojiyo colaadaha ku saleysan beelaha ee ka dhacay Shabeellaha hoose, wuxuuna sheegay in ay dowladda gurmad gaarsiin doonto dadka rayidka ah ee ay dagaalada Barakaciyeen.
Dagaallada u dhaxeeya beelaha Biimaal iyo Habargidir ayaa kusoo laalaabtay gobolka Shabeellaha Hoose, iyadoo colaadaasi ka dhalatay muran dhulka ah.